Blockchain Izindaba 01.06.2018 - Blockchain Izindaba
Kraken Daily Market Umbiko 01.06.2018
$128M adayiswa kuwo wonke ezimakethe namuhla
Huobi ukuqalisa mfihlo ETF
platform Cryptocurrency zokuhweba Huobi uqala Isikhwama exchange-adayiswa mfihlo ezisekelwe (ETF), inketho utshalomali oluyokwenza zimali okudayisa ukuzuza ukuchayeka ubhasikidi amafa esikhundleni esisodwa nje ngesikhathi.
Insimbi utshalomali, ngokuthi HB10, manje ivulekele okubhalisele nobheka ukuthenga usebenzisa cryptocurrencies kuphela, esikhundleni Fiat zezimali.
Inkampani eminye wanezela ukuthi njengoba umkhiqizo izoba khona zimali zezikhungo, ayengakwenza engase “ukunciphisa umthelela entry izikhungo kanye ophumayo” ku cryptocurrencies olulodwa.
GMO iqala uhlelo lokusebenza lweselula esikuvumela abadlala uhola Bitcoin
Japanese ubuchwepheshe ngokuqinile GMO Inthanethi Group uye wazakhela uhlelo lokusebenza olusha mobile esikuvumela abasebenzisi uthole Bitcoin nje ngokudlala imidlalo.
Uhlelo lokusebenza olusha - ngokuthi CryptoChips - ekuqaleni ihlanganiswe real-time indawo empini game futhi lakhiwa GMO ngokuthi “Impi kwendle.”
I-giant tech wathi ithemba ukhuthaze umphakathi ukuba bajwayelane cryptocurrencies nge uhlelo lokusebenza olusha, kusukela abasebenzisi kuyodingeka usebenzise wallets zabo digital ukuthola futhi ukusebenzisa Bitcoin.
Singapore usomabhizinisi othenga ilayisense Japanese mfihlo esenana $ 67M
Eric Cheng, a yimpumelelo ingcebo usomabhizinisi, usezuze a 100% esigxotsheni Japanese FX FSA-ilayisensi Trade lwezezimali Co., Ltd, isiteji FX ukuhweba, kanye BitTrade, umuntu ogunyazwe cryptocurrency yokuhweba platform ikomkhulu Japan.
Yena uhlose ngobudlova sikala platform Ukuhweba ku enkulu kunazo zonke eJapane & engase kukhulisa tinsita jikelele.
Eric Cheng iba owezizwe lokuqala ukuba ngumnikazi 100% esigxotsheni endaweni Japanese FSA-ilayisensi platform cryptocurrency zokuhweba
inyuka Square value $ 8b kusukela ngokungeza Bitcoin Ukuhweba ngonyaka odlule
Amasheya of Square Inc. baye laphindeka kabili ukubaluleka ngonyaka odlule.
isitokwe eqinile wenkokhelo uye angena ngomfutho cishe 50%, unezela mayelana $8 billion ngonyaka value emakethe, ngoba iphuma out Bitcoin Ukuhweba ngoNovemba amakhasimende of Cash yayo App, okukuvumela abasebenzisi uthumele imali kubangani nomndeni.
IMF olusemthethweni unxusa amabhange amakhulu ancintisane cryptocurrencies
Isikhulu esiphakeme e-International Monetary Fund (IMF) igqugquzela amabhange amakhulu ukuthuthukisa "ezingcono" Fiat zezimali ukuze silondoloze ubuholi babo ijubane phezu cryptocurrency.
lomqondisi IMF Dong Wenza icala lokuthi "amafa mfihlo olulodwa kungehlisa ukufunwa emaphakathi imali ebhange" nokuthi zikahulumeni fanele senze okuningi meli lokho kwenzeke. Ngamanye amazwi, ukuze "kuvimbe ingcindezi yokuncintisana amafa mfihlo kungase kunamandla kangakanani Fiat zezimali,"Amabhange amakhulu kudingeka ukwamukela ezinye imiqondo engumongo ukushayela amafa digital.
Thumela Previous:Blockchain Izindaba 31.05.2018
Thumela Landelayo:Blockchain Izindaba 02.06.2018